Uhlu Lokuhlolwa Kwezici ze-Ecommerce: I-Ultimate Must-Haves Yesitolo Sakho Esiku-inthanethi | Martech Zone
Okunye kokuthunyelwe okuthandwa kakhulu esikwabile kulo nyaka kube ukubanzi kwethu iwebhusayithi ifaka uhlu lokuhlola. Le infographic ukulandelwa okuhle ngenye inkampani enkulu ekhiqiza ama-infographics amahle, ukukhangisa kwe-MDG.
Yiziphi izakhi ze-e-commerce zewebhusayithi ezibaluleke kakhulu kubathengi? Yini okufanele imikhiqizo igxile kuyo isikhathi, amandla, kanye nesabelomali ekuthuthukiseni? Ukuthola lokho, sibheke inqwaba yocwaningo lwakamuva, imibiko yocwaningo, namaphepha ezifundo. Kusukela kulokho kuhlaziywa, sithole ukuthi abantu kuzo zonke izifunda nakuma-vertical bahlala benenani elifanayo lezici ezimbalwa zewebhusayithi lapho bethenga online. Okufunwa Abathengi Kumawebhusayithi E-Commerce
Imiphumela yocwaningo lwabo kanye nokuhlola kwabo ochwepheshe kuholele ezigabeni ezinkulu ezi-5 ezihamba ngezinto ezibaluleke kakhulu zenkampani ye-ecommerce yokushayela ulwazi, igunya nokuguqula. Ngingeze ezinye izintandokazi zami ezaphuthelwa yimiphumela yocwaningo.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi
Ama-47% wabathengi athi ukusebenziseka nokuphendula yizinto ezibaluleke kakhulu kuwebhusayithi ye-e-commerce
Speed - isiza se-ecommerce kumele sisheshe. Abathengi abathathu kwabane bathi bazoshiya iwebhusayithi ye-e-commerce uma yephuza ukulayisha
Enembile - ukuzulazula, izinto ezivamile zenqola, nezici zesiza kumele kube lula ukuzithola nokuzisebenzisa.
Isabele - Ama-51% abo bonke abantu baseMelika bathenga online nge-mobile, ngakho-ke isitolo kufanele sisebenze ngokukhululekile kuwo wonke amadivayisi.
Shipping - izindleko zokuthumela ezibizayo nezikhathi ezinde zokulethwa kuzoba nomthelela ekuthengisweni.
Security - qinisekisa ukuthi uphuma uphelele kusitifiketi se-EV SSL futhi ushicilele izitifiketi zokuhlolwa kwamabhuku ezokuphepha ezivela eceleni.
Buyisela inqubomgomo - vumela izivakashi zazi inqubomgomo yakho yokubuyisa ngaphambi kokuthenga.
Insizakalo yekhasimende - nikeza ingxoxo noma inombolo yocingo ukuphendula ekuthengiseni noma kwizicelo zesevisi.
Ulwazi Olubanzi Lomkhiqizo
Izivakashi kaningi azikakulungeli ukuthenga, empeleni zilapho ukucwaninga. Uma unikeza lonke ulwazi abaludingayo, bazokwazi ukuthenga lapho luphelele.
Imininingwane yomkhiqizo - Abathengi abangama-77% bathi okuqukethwe kuthonya isinqumo sabo sokuthenga
Umbuzo nezimpendulo - Uma imininingwane ingekho, ama-40% wabathengi abaku-inthanethi bafuna izindlela zokubuza imibuzo nezimpendulo ngaphambi kokuthenga
Ukunemba - Abathengi abangama-42% babuyisele ukuthengwa nge-inthanethi ngenxa yolwazi olungelona iqiniso kanti abathengi abangama-86% bathi kungenzeka bangaphinde baphinde bakuthenge endaweni abayithenge kuyo.
Kukhona kusitoki - Akukho lutho olukhungathekisa njengokudlula lapho uya ekuphumeni ngaphambi kokuthola ukuthi umkhiqizo awusekho. Gcina isiza sakho nemiphumela yakho yosesho isesimweni esisesitokweni usebenzisa amazwibela acebile.
Izithombe, Izithombe, Izithombe
Izivakashi zivame ukusesha imininingwane ebonakalayo emikhiqizweni ngoba azikho ukuzihlola mathupha. Ukuba nokukhethwa okuhle kwezithombe zokucaca okuphezulu kuzoshayela ukuthenga okwengeziwe.
Izithombe Eziningi - Abathengi abangama-26% bathi balahle ukuthengwa okuku-inthanethi ngenxa yezithombe ezisezingeni eliphansi noma izithombe ezimbalwa kakhulu.
Izinqumo Eziphezulu - Ukunikeza amandla okubona imininingwane enomkhawulo kuzinto zesithombe kubaluleke kakhulu kubathengi abaningi online.
Zoom - 71% wabathengi basebenzisa njalo isici sokusondeza kuzithombe zomkhiqizo
Speed - Qiniseka ukuthi izithombe zakho zicindezelwe futhi zilayishwe kusuka kunethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe ukuqinisekisa ukuthi zilayishwa ngokushesha. Ungahle ufise nokuthumela kabusha izithombe ezingagxili (njengakwi-carousel).
Izilinganiso kanye Izibuyekezo
Ukufaka ukubuyekeza / izilinganiso ezingenamkhawulo kusayithi lakho kuzohlinzeka ngokuhlukahluka kwemibono futhi kwakhe ukwethenjwa ngabavakashi. Eqinisweni, abathengi abangama-73% bafuna ukubona ukuthi abanye abathengi bathini ngaphambi kokwenza isinqumo
Akukhishwa - Abathengi abazethembi izilinganiso eziphelele, bacwaninga izilinganiso ezingezinhle ukuze babone ukuthi imibono yabanye ngomkhiqizo izosithinta yini isinqumo sabo sokuthenga.
Ilungu langaphandle - 50% yabathengi bafuna ukubona ukubuyekezwa komkhiqizo ovela eceleni
Okunhlobonhlobo - Abathengi bafuna ukuzizwa bekhululekile ngokuthenga, bafuna ukwazi ukubamba izinkampani ukuthi ziphendule, futhi bafuna ukubona izibuyekezo ezahlukahlukene ezigxila kuzinga nokuphepha kwemikhiqizo.
Amazwibela - Nweba ukusebenza kwezilinganiso zakho nezibuyekezo zakho usebenzisa amazwibela acebile ukuze avele emiphumeleni yosesho.
Ukusesha Komkhiqizo On-Site
Ukusesha esizeni kubalulekile kulo lonke ulwazi lwe-e-commerce. Kwabanye abathengi, abathengi abangama-71% bathi basebenzisa njalo usesho, futhi imvamisa kuyinto yokuqala abaya kuyo esizeni.
Qedela ngokuzenzekelayo - Yakha ngokusebenza okuphelele okuzenzakalelayo okuhlunga amagama womkhiqizo, izigaba, njll.
Usesho lwe-Semantic - Sebenzisa usesho lwe-semantic ukuletha imiphumela engcono
Izihlungi - 70% yabathengi bathi bakwazisa kakhulu ukukwazi ukuhlunga imikhiqizo ngosesho lwesiza
Ukuhlunga - Amandla wokuhlela kuzibuyekezo, ukuthengisa, namanani entengo konke kuyasiza kubasebenzisi ukuthola imikhiqizo abayifunayo.
Ama-breadcrumbs - Faka izinto zokuzulazula, ezinjenge-breadcrumbs kumakhasi wemiphumela
Imiphumela eningiliziwe - Thumela izithombe nezilinganiso ngaphakathi kwemiphumela yosesho
Iziqhathaniso - Nikeza ithuba lokuhlaziya izici zomkhiqizo namanani entengo eceleni.
Tags: ngokuzenzakalelayobaxoxeabathengiInsizakalo yekhasimendee-commercei-ecomezokuhweba ngekhompyuthaama-ecommerce amazwibela acebileisivinini se-ecommercemcommercemdg ukukhangisacommerce mobileopengraphukuqhathanisa komkhiqizoizihlungi zomkhiqizousesho lomkhiqizoukuhlunga umkhiqizoimibuzo nezimpenduloizilinganisoubuyele inqubomgomoIzibuyekezoi-schemanokuvikelekausesho lwe-semanticlokuthumelaukusesha isayithiUkunamathelazoom
Ungasisebenzisa Kanjani Isixazululo Sesisekelo Solwazi
I-Clipcentric: I-Rich Media kanye ne-Video Ad Creative Management